Hargeisa Times - Fashilka Wassarda Waxabarshada Iyo Farsamo Xumida Agaasime Axmed Abkor Oo Dhawaan Hogaanka Wassardas Qabbtay
Fashilka Wassarda Waxabarshada Iyo Farsamo Xumida Agaasime Axmed Abkor Oo Dhawaan Hogaanka Wassardas Qabbtay
Published On Sunday, July 02, 2017 By Burhaan A.khalaq. Under: Articles, Entertainment, Highlights, Ka yar naso siyaasada.
Wasaarada Waxbarashada oo laga cabsi qabo in ay gabi ahaanba fashilanto marka agaasimaha cusub ee Axmed Abokor la wareego. Waxaan arkayay dhalinyaro hambalyaynaysa magacaabista Axmed Abokor ee agaasimaha Guud ee waxbarashada, balse waxaanay ogayn in Axmed Abokor yahay masiibo wasaaradda loo soo diray. Abokor wuxuu muddo kazoo shaqeeyay hay’adaha dalka jooga, balse waxa la xaqiijiyay in laga caydhiyay shaqadii u danbaysay ee uu ka hayay Save the Children UK sababo musuqmaasuq.
Waxan sidoo shakhsiyan xogogaal u ahaa dhibaatooyin uu ka dhex aloosay SONYO oo uu ku jiri jiray Boardkeeda iyo magaalada Berbera oo NGO ku leeyahay. Abokor waa shakhsi ku caan baxay wanjalaadda iyo iska horkeenka. Wuxuu u kala sheekeeyaa dadka waxaanu isku diraa saaxiibo aan lakala dhex mari jirin.
Waa nin aan waxba ka xishoon oo indha adag. Aan waxba xeerin balse calooshiisa iyo hungurigiisa uun eega. Waxaan usoo joogay meelo badan oo uu rabshado ka dhex abuuray oo ay ugu muhiimsanayd SONYO iyo hay’adda YOVENCO ee berbera ka hawlgasha. Hay’adahaasi oo ay dhalinyaro hormuud ka ahaayeen waxuu abokor kaga duwanaa qolyaha inuu ahaa qof markasta dantiisa gaarka ka hor mariya ta guud hadii uu ka waayana aan waxba xeerin ee sameeya waxkasta oo uu ku baabiinayo meeshaasi.
Hadaan usoo noqdo waxbarashada oo ah wasaarad halbawle ah isla markaana mudooyinkan danbe ee wasiir Cabdilahi Habane wasiirka ka ahaa ku talaabsatay horumar wayn oo la wada dareemay. Waxa soo noqotay kalsoonidu ardayda iyo macalimiinta. Waxa markii ugu horeysay Somaliland yeelatay buugaag lasoo daabacay oo wlaiba qiimaha ugu jaban ah oo arday waliba awoodi krayay.
Imtixaanaadkii oo beryihii u danbeeyay oo dhan iska ahaa wax aan macno ku fadhiyay ardayduna aanay lahaan jirinba cid ka hadha ayaa dib loo habeeyay. Welwelka igu kelifay in aan qoraalkan qalinka u qaato ayaa ah aqoonta aan u leeyahay ABokor iyo wasaarada uu yimi waliba xiligan kala guurka ah. Sida uu noo sheegayay marar kale duwan oo aanu goobo kala duwan ku kulanay wuxu abokor ku hamiyay in wasaaraddan uun mar uun yimaado isagoo ku tuhmaya in ay tahay goob uu lacag badan ka samayn karo isla markaana uu danihiisa gaarka ah iyo NGOgeeda uu berbera ku shaqaystana uu mashaariic uga samayn karo.
Waxaan eegi doona ayaamaha iyo wiigaga xiga iyo sida uu noqdo xaalka wasaaradani oo aan anigu hubo in masiibo ku habsatay mar hadii Axmed Abokor oo sida diirta wax u cuna sida shaydaamadana wax iskugu dira laga dhigay agaasimaha Guud ee wasaarada. Wasiirka waxbarashada ayaa isagana nasiib darro ku tahay in dedaalkiisi halkaasi ku hagaasi doono.
Qore Ahmed Mohamoud Cileeye